Mercedes-Benz C230 Kompressor 2005 (#710241) ကို Bahan ၿမ... | CarsDB
6722 total views,5today
Lot Number: #710241
Mercedes-Benz C Class လေးတစ်စီးရောင်းဖို့ရှိပါတယ်, C 230 (2005) လေးဖြစ်ပြီး Sport Suspension, Sport Seat များဖြင့် Sport Type ဆန်ဆန် မောင်းနှင်နိုင်မည့် အမျိုးစားပဲ ဖြစ်ပါတယ်, အတွင်းပြင် ပါဝင်တဲ့ Equipment များ အနေဖြင့်
-Omission Of Line Logo
-Mob. Phone Prewiring (UHI) F. USA/Canada
-Electric Sunroof, Glass Version
-Instrument With Mileage Reading
-Paint Protection - Preservation Freight Packaging
-Audio 20 CD Radio, USA
-ISOFIX Child Seat Anchoring System, Rear
-THERMATIC Automatic Climate Control|
-Blue Tint.Gl.Allr./Single-L.Safety Gl.Re.Win.
-Radio Remote Control With Panic Switch တို့ပါဝင်ပြီး စျေးနှုန်းသင့်တင့်တဲ့ ကားလေးကို ကြည့်ပြီး စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းမလား ချေးငွေဖြင့်အရစ်ကျဝယ်ယူမလား အသေးစိတ်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါပြီ။
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Than Swe Pyae မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Mercedes-Benz C230 Kompressor 2005 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။